Raha tsy fantatrao izay hatao amin'ny fiainanao dia vakio ity. - Blog
Raha tsy fantatrao izay hatao amin'ny fiainanao dia vakio ity.
Mahatsapa ianao fa misintona eny amin'ny ranomasina mampientanentana, tsy manintona, monotony ary tsy afaka mahita ny morontsiraky ny nosy mampionona sy mahafa-po ianao izay miandry anao ny raison d'étre (a.k.a. ny antony nahatonga anao).
Aza manahy, tsy irery ianao. Raha ny marina dia anisan'ny vondron'olona betsaka indrindra eto amin'ity planeta ity ianao. Tsy fantatrao izay hatao amin'ny fiainanao ary tsy fantatrao ihany koa ny fomba hahitana izany.
Ny zavatra voalohany tokony ho takatra dia izao dia olona ara-dalàna tanteraka no tsy teraka nahalala izay ho anjara asany farany eo amin'ny fiarahamonina. Teraka tamin'ny fahafaha-manao tsy manam-petra hahitana ny antson'izy ireo kosa izy ireo. Ny olana dia na dia goavana aza ny safidy dia sarotra be foana ny misafidy.
Inona koa, ny fiainana dia milomano foana ary miova ny safidy tsara rehefa mivoatra ny dianao. Tsy mahagaga raha maro amintsika no mahita ny tenantsika miaraka amin'ny fahatsapana manjavozavo fa mety hisy be lavitra kokoa any raha tsy mahatratra izany fotsiny isika.
Raha sendra nahita an'ity lahatsoratra ity ianao dia inoana fa iray amin'ireo olona ireo ianao. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, ity misy toro-làlana vitsivitsy hanarahanao izay tokony hitarika anao amin'ny làlana tsara hahitana ilay zavatra tena tianao ho tratrarina amin'ny fiainana.
Tsy ho antsika ny ho avy
'Ny ho avy tsy antsika ny mahita' dia tononkira avy amin'ny hira malaza Doris Day ary tena marina amin'ny lafiny maro izy ireo. Mety hanomboka haka sary an-tsaina an'izay namboarin'ny fiainana ho antsika isika ary tsy tokony hanao izany latsaka ao anaty fandrika ny fisainana dia mila manomana mandritra ny androm-piainantsika manontolo isika.
Tsy ho fantatrao mihitsy izay mety ho manodidina ny fahasalamanao, ny toe-javatra iasanao, ny fianakavianao ary ny fiarahamonina midadasika dia mety hahita fiovana be daholo ary zavatra maro no tsy azo kasaina.
maninona aho no mankaleo ny fiainana
Azonao atao anefa ny miandrandra amin'ny fotoana fohy ary manandrana manao zavatra maro izay mitondra fifaliana araka izay azonao atao. Na mahatafiditra ny asanao na ny fialam-bolinao tsotra izao, amin'ny alàlan'ny fanenjehana fotoana tsara, azontsika atao farafaharatsiny mba hahatonga ny dia hahafinaritra kokoa.
Vokatra iray azo avy amin'io fomba io dia azonao atao mahita talenta miafina na faniriana madio amin'ny fikatsahana fotoana ahafahana miaina ny tena fahasambarana.
Ary ho an'ireo zavatra tsy hitanao mialoha ireo dia tsy afaka manandrana mihodina miaraka amin'ireo totohondry fotsiny ianao ary mandray azy ireo rehefa tonga izany. Tsy azo ihodivirana ny tsy fahatokisana ary ny tranga sasany dia hiteraka korontana lehibe amin'ny fomba iray hiatrehana izany dia ny fiezahana hijerena ny lafy ratsy tsirairay ho fiandrasana tsara hitranga - raha ataonao izany.
Raiso ny alahelo hahatratrarana fahasambarana
Ny làlan'ny fiainana dia tsy dia malama loatra, midika izany fa hahita tsy fahatomombanana lehibe ianao. Na tsy fahampian'ny vola ara-batana misakana anao tsy hanao zavatra na horohoron-tany mampihetsi-po izay hampivadika ny tontolonao io dia mila manaiky fotsiny ianao fa tsy azo sorohina tanteraka ny fikapohana sy ny fikapohana.
Isaky ny miaina tsy mahazo aina toy izany ianao dia hahafantatra bebe kokoa momba ny tenanao sy izay tadiavinao amin'ny ho avy. Ho hitanao hoe iza ianao ary tsy te-hiaritra ary hitarika anao amin'ny làlan-kaleha mety kokoa amin'ny dianao ity.
Ohatra, mety te ho mpisolovava ianao amin'ny voalohany, saingy mahita ny tenanao mandritra ny 3 taona amin'ny fampiofanana anao miaraka amin'ny taona maro mialoha anao, tsy manam-bola, miasa mandritra ny 70 ora ary tsy faly. Nandalo fe-potoana tsy fahazoana aina lehibe ianao, saingy nianatra ianao hoe aiza ny fetranao momba ny fanosehana ny sainao sy ny vatanao ho an'ny tanjon'ny asa aman-draharaha. Azonao atao izao ny manamboatra ny lalanao ary mitady fotoana samihafa mifanaraka tsara amin'ny fandeferanao ara-tsaina sy ara-batana.
Atsofohy ireo fanelingelenana ary esory amin'ny fanemorana
Aza adino mihitsy fa miandry fotoana tsy misy olona ny fotoana. Mety te hahita sy hanenjika nofinofy ianao, saingy tsy ho vitanao izany raha mametraka ny tsy azo ihodivirana ianao. Tazomy ny fialam-bolinao, ny fotoam-pianakavianao ary ny zavatra hafa izay tena ankamamianao, fa araraoty daholo ireo fotoana very maina ary manaova zavatra miaraka amin'izany.
Ny tsy fisokafanao ny làlan-kalehanao amin'ny fiainana dia tsy hoe tsy misy fiezahana mafy sy ezaka manokana. Mila apetrakao ny sainao, ampidiro ny vatanao ary ampiasao ny fotoana anananao.
Mikaroha làlana mety misy amin'ny asa, miresaka amin'ny olona manana traikefa eny an-tsaha, na mpilatsaka an-tsitrapo aza raha azo atao mba hahitana raha mety aminao na tsia. Tsy afaka milaza marimarina ianao fa hahafinaritra anao ny zavatra iray raha tsy efa maloto ny tananao manao azy mandritra ny fotoana kelikely. Ary ianao ihany no afaka manao an'izany raha mijanona tsy manao fialantsiny ianao ary mijanona tsy mitady fomba handanianao fotoana.
Nahoana ny olona niainga 10 antony
Fa maninona aho no kamo ary ahoana no fomba tsy avelako handresy ny hakamoana?
Maninona ianao no mila drafitra fampandrosoana manokana (sy singa 7 tokony hananana)
Avelao ireto zavatra 20 ireto raha te hahomby amin'ny fiainana ianao
Alohan'ny hamerenanao ny tenanao dia alao antoka fa hametraka an'ity fanontaniana ity ianao
'Tsy mahay na inona na inona aho' - Nahoana no lainga lehibe iray ity
Antony 5 Ny tsirairay dia tokony hanao birao fahitana
Mametraha fanontaniana (Samy lehibe sy kely)
Tsy afaka mahazo fahalalana ianao raha tsy mametraka fanontaniana vitsivitsy, fa rehefa mitady tanjona mitondra fiara ianao hitari-dalana ireo hetsika ho avy amin'ny fiainanao dia matetika ianao no mila manontany tena fa tsy ny hafa.
Indraindray ianao dia hahita ireo fanontaniana lehibe manampy, toy ny hoe iza ianao mazoto indrindra amin'ny , izay hijoroanao amin'ireo olana ara-pitondrantena lehibe, inona no hataonao lohalaharana raha tsy ny vola sy ny fotoana no tanjona - izany karazan-javatra izany.
Amin'ny fotoana hafa, dia mety ho ireo fanontaniana kely kokoa izay manampy anao hanatsara ny làlan-kalehanao. Tianao ve ny miasa amin'ny tontolon'ny birao? Tianao ve ny tanàna, tanàna, na firenena mipetraka? Firy ny hetsika ara-tsosialy ampy anao? Zava-dehibe aminao ve ny fihemorana?
Arakaraka ny ahitanao ireo fanontaniana sy fanontaniana hafa ireo no manakaiky kokoa anao mahatakatra hoe iza ianao ary inona ny fiantsoanao tonga lafatra amin'ny fiainana (na, farafaharatsiny, amin'ny fiainanao ankehitriny).
Vonona ny hanao sorona mandritra ny fotoana fohy
Amin'izao fotoana izao ianao angamba mahatsiaro very tsy fantatrao izay hatao amin'ny fiainanao ary te hahatratra ny toerana alehanao ianao. Na eo aza izany, eo anelanelan'ny misy anao izao sy izay tianao hisy, misy lalana sarotra haleha.
Ny tsy fahazoana aina dia zavatra efa nolazaina, fa zavatra hafa mety ho zatrao ny fahafoizan-tena.
Hitanareo, manana fotoana sy hery be fotsiny izahay eo am-pelatananay ary na dia mety mahita fomba hampiasana roa aza ianareo izao, raha te handray an'io sidina io ianao fiainana afa-po kokoa , saika tsy maintsy hafoinao ny sasany amin'ireo zavatra raisinao ho tsy misy dikany izao .
Angamba, rehefa avy nanao ny fikarohana sy nametraka ny fanontanianao tamin'ny tenanao ianao dia manapa-kevitra ny hanangana orinasa. Saingy mbola tsy manana vola ilaina ianao mba hialana amin'ny tany. Mety mila mandany ora fanampiny amin'ny asanao ianao izao, mitandrina bebe kokoa amin'ny fandanianao, ary mamela ny rendraranty ankehitriny toy ny fiara tselatra sy ny fialantsasatra avy any ivelany mba hahatanteraka ny nofinao.
Tokony ho vonona ny tsy hitandrina ianao amin'izao fotoana izao mba hiroborobo amin'ny ho avy, satria raha tsy izany dia hiady mafy ianao hanova ny toe-javatra misy anao ary handroso amin'ny lalan'ny fahasambarana.
Indraindray ianao dia mila mahita ireo fotoana mety tonga mandondona eo am-baravaranao ary tokony ho vonona hamaly ny antson'izy ireo ianao. Tadidio fa ny fanandramana zavatra iray dia fomba iray mahomby indrindra hahitana fa mety aminao izany, ka rehefa mitady hanoro anao ny lalana ny fiainana dia aza raharahianao izany - mahazoa tanana roa ary jereo ny toerana itondrany anao.
Mety matahotra ianao fa tsy fotoana mety na fotoana mety, fa tsy ho fantatrao mihintsy raha tsy hoe mitsambikina ianao ary mahita.
Safidy ny mipetraka eo an-tananao ary tsy manao na inona na inona, fa mety hanenenanao indrindra rehefa mihalehibe ianao. Mahalana ny olona no manenina amin'ny zava-niainany, saingy matetika izy ireo no manenina fa tsy mandeha amin'ny voalohany.
Mbola tsy azonao antoka izay hatao amin'ny fiainanao? Miresaha amin'ny mpanazatra fiainana iray androany izay afaka mitarika anao amin'ny fomba hahalalanao azy. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
Zavatra 5 tsy fantatrao momba ny fanambadian'i Vince sy i Linda McMahon
Ahoana ny fijanonana amin'ny fitarainana amin'ny fotoana rehetra: toro-hevitra tsy misy toro-hevitra 7!
Safidy sa fahatsapana ny fitiavana marina?
Dingana 4 handresena ny sabotage samirery ary hialana amin'ny fiainana
Zavatra 9 tokony hatao rehefa mahatsiaro ho resy na kivy ianao
'Gaga sy sanganehana aho': nandefa fialan-tsiny i Billie Eilish taorian'ny famaliana tampoka noho ny fanamarihana fanavakavaham-bolon-koditra sy ny fampiasana fitenenana aziatika
Ny haavon'ny WWE Superstars (avy amin'ny 155cm ka hatramin'ny 221cm): Firy ny haavon'ny Alexa Bliss, Brock Lesnar & Drew McIntyre?
Ahoana ny fomba hanekena ny fialan-tsiny ary hamaly ny olona miala tsiny
Ireo mpitsara WWE dia mizara tantara mahatsikaiky momba an'i Brodie Lee
WWE News: Big E sy tompon-daka WWE Divas teo aloha Kaitlyn tafaraka
Fandresena lehibe indrindra WWE Andre The Giant Memorial Battle Royal
Hornswoggle dia manome antsipiriany momba ny fomba nanambarana azy ho 'zanakalahin'i Vince McMahon'
mampiaraka olona tsy mbola nanao firaisana
firy ny chad gable
ahoana no ahafahako mitia ny sipako ho be fitiavana kokoa
mila namana aho izao
brock lesnar manapaha ny tadiny
rehefa misy bandy miteny hoe mahafatifaty ianao